Hwana hwaJesu hwaive sei? Discover Online ▷ ➡️
Hwana hwaJesu hwaive sei? Isu tese tinoziva meseji yaJesu, mararamiro aakaita uye, pamusoro pezvose, mafiro aakaita. Hupenyu hwemunhu anonyanya kukosha munhoroondo inyaya yekudzidza uye kuongororwa nevaporofesa, vezvakaitika kare, vafundisi uye vatendi vanobva kumativi ese epasi. nyika. Nekudaro, iyo chete ruzivo rwatinarwo nezve hupenyu hwake runogona kuwanikwa mu evhangeri, iyo inonyanya kutariswa pamakore matatu apfuura ehupenyu, achisiya hudiki hwake kumashure.
Tinofanira kuyeuka kuti chinangwa cheEvhangeri hachisi chekuita yakazara biography yemunhu, asi tarisa pane meseji Aaida kuburitsa kwetes. Naizvozvo, bhaibheri rinotaura zvishoma nezve hudiki hwake nekuti hazvina basa.
Zvisinei, vavhangeri vakatisiya imwe data inotibvumidza isu kuti tivakezve zvishoma zvaive zvakaita hudiki hwaJesu, kwaakazvarwa uye nerudzii redzidzo raaive naro.
1 Hwana hudiki hwaJesu hwaive sei
1.1 Kuberekwa uye makore ekutanga
1.2 Anecdote yaJesu ane makore gumi nemaviri
2 Jesu aidzidza sei?
3 Jesu akaita zvishamiso muhudiki hwako here?
Hwana hudiki hwaJesu hwaive sei
Kuberekwa uye makore ekutanga
Jesu akaberekerwa muBheterehema reJudhea. Zvichida mugore zero. Pane zvinopesana zvine chekuita negore chairo rekuzvarwa kwake, zvisinei, tinogona kuwana kuzvarwa kwake mumakore ekupedzisira ekutonga kwa Herodhi.
ari vabereki vaJesu, Maria naJosé, Vaigara muNazareta, asi vaifanira kuenda kuBheterehema kunoteerera zvakarairwa naMambo Kesari Agasto, uyo akatema kuverengwa kwevanhu kwakamanikidza munhu mumwe nemumwe kunyoresa muguta rake raakabva.
Mumakore iwayo, Mambo ainzi Herodhi Mukuru akatonga. Sekureva kweEvhangeri, paakaona kuseka kwaiitwa nevarume vekuMabvazuva, akatemera chirango cherufu kuvana vese vari pasi pemakore maviri ekuberekwa vaigara muJudhiya, saka Jesu nevabereki vake vakatizira kuEgipita. Zvisinei, mushure rufu kubva kuna Herodhi, mhuri yakadzokera kuNazareta. Ikoko Jesu akakurira uye aive nehudiki hwakajairika senge chero mwana wenguva yake. Akadzidza mumasinagoge uye akadzidza kutengeserana kubva kuna Baba vake semumwe mwana wechiJuda.
Asi Herodhe wakafa, tarira, mutumwa waIshe wakaonekwa muchiroto kuna Josefa muEgipita,
Achiti: Muka, utore mucheche namai vake, uende kunyika yaIsraeri; vakafa ndevaya vaitsvaga kufa kwemwana.
Naizvozvo akasimuka, akatora mwana namai vake, akasvika kunyika yaIsraeri;
Zvino achinzwa kuti Arikerao anotonga muJudhiya panzvimbo yababa vake Herodhi, akatya kuendako; asi akayambirwa nezvakazarurwa pakurota, akaenda kumatunhu eGarirea.
Akasvika akagara muguta rinonzi Nazareta; kuti zvizadziswe zvakarehwa nevaporofita, kuti achanzi muNazareta.
Anecdote yaJesu ane makore gumi nemaviri
Iyo chete anecdote yatinogona kuwana mune bhaibheri inoratidza Jesu aine makore gumi nemaviri akaenda kuJerusarema nevabereki vake kunopemberera Paseka. Vabereki vake pavakadzokera kumba, havana kuziva kuti Jesu aive asara kumashure. Vakafunga kuti aive nedzimwe hama dzake. Mushure mekutsvaga kwemazuva matatu, vakawana mukomana ari mutemberi, achiteerera uye achibvunza mibvunzo yevadzidzisi vemutemo.. Vabereki vake vakamupopotera nekuda kwekusava nehanya navo, asi akavapindura akanga ari mumba mababa vake.
Gore rimwe nerimwe vabereki vaJesu vaienda kuJerusarema kuMutambo wePasika. Paaiva nemakore gumi nemaviri, vakaendako setsika yavo. Pashure pomutambo, vakatanga rwendo rwokudzokera, asi mucheche Jesu akanga asara muJerusarema, vabereki vake vasingamuoni. Ivo, vachifunga kuti akanga ari pakati peboka revafambi, vakafamba rwendo rwezuva rose vachimutsvaka pakati pehama neshamwari. Havana kumuwana, vakadzokera kuJerusarema kundomutsvaka. Mushure memazuva matatu vakamuwana mutembere, akagara pakati pevadzidzisi, achivateerera nekuvabvunza mibvunzo. Vose vakamunzwa vakakatyamadzwa nenjere dzake nemhinduro dzake. Vabereki vake vakati vachimuona, vakashamiswa.
"Mwanakomana, nei wazviita zvakadai nesu?" Mai vake vakamuudza. Tarira, baba vako neni tanga tichikutsvaka tichishungurudzika!
"Sei vanga vachinditsvaga?" Hamuna kuziva here kuti ndinofanira kuva mumba maBaba vangu?
Asi ivo havana kunzwisisa zvaaitaura.
Ruzivo chete rwatinarwo, kunze kwekuzvarwa kwake uye anecdote yatatotaura, ndiyo Jesu aive mwana anoteerera akakura muhukuru, huchenjeri, uye nenyasha.
Mwana akakura akasimba; akafambira mberi muuchenjeri, uye nyasha dzaMwari dzakamuperekedza.
Saka Jesu akaburuka nevabereki vake kuNazareta ndokugara pasi pavo. Asi mai vake vakachengeta zvinhu zvese izvi mumoyo mavo. Jesu akaramba achikura muhuchenjeri nekukura, uye zvakanyanya nekufarira kufarirwa naMwari nevanhu vese.
Ruka 2: 51-52
Jesu aidzidza sei?
Iwo mareferenzi mashoma ehucheche hwake anoita kuti tifunge kuti Jesu aigona kuverenga chiHebheru uye ainyatsoziva magwaro. Zvichida akagamuchira fundo yekutanga iyo iyo mwana wega wechiJuda aigamuchira kuverenga nekunzwisisa Shoko raMwari. Asi akange asina zvidzidzo zvakakura sevamwe vanaRabhi. Huchenjeri hwake hwakauya kubva pahupenyu hwake hwekuyanana naMwari.
Akaenda kuNazareta, kwaakakurira, uye mumwe Mugovera akapinda musinagoge, setsika yake. Akasimuka kuti averenge.
Jesu aive muvezi sababa vake. Angangove aive Joseph akamudzidzisa iro basa panguva yehudiki hwake sezvaive tsika mukati memhuri dzevaJuda muzana ramakore XNUMX. Zvakare, zvingangove kuti aive nehukama nezvekurima, nekuti zviitiko zvekurima sekukohwa zvaisanganisira mhuri dzese nenharaunda.
La tsika dzidzo zvaJesu zvimwe mutoro wevabereki vavo. Basa revabereki raive rekudzidzisa vana vavo maitiro ekuita nenzira kwayo uye kushandisa mitemo yaMwari muhupenyu hwavo hwezuva nezuva.
Jesu akaita zvishamiso muhudiki hwako here?
Kwete Jesu haana kuita zvishamiso paudiki hwake. ari chishamiso chekutanga raJesu raive rini akachinja mvura kuita waini, mushure mekubhabhatidzwa kwake, aine makore angangoita makumi matatu. Hwana hudiki hwaJesu hwaive hwakajairika, sevamwe vana vese venguva iyoyo.
Ichi ndicho chiratidzo chekutanga chakaitwa naJesu muKana yeGarirea. Zvino wakaratidza kubwinya kwake, vadzidzi vake vakatenda kwaari.
Hama dzaJesu dzakashamisika pavakamuona achiparidza uye achiita zvishamiso. Zviripachena, Havana kumbova nechikonzero chekufungidzira kuti Ndiye Mesia. Dai akaita zvishamiso achiri mudiki, hapana munhu angadai akashamiswa nebasa rake.
Pakasvika Mugovera, akatanga kudzidzisa musinagoge.
"Ko zvinhu zvakadai akazviwanepi?" Vazhinji vevakamunzwa vakati nekushamisika. Huchenjeri hupi uhu hwawakapihwa? Mashura aya anobva mumaoko ake anotsanangurwa sei? Haasi iye muvezi here, mwanakomana waMaria uye mukoma waJakobho, Josefa, Judhasi naSimoni? Hanzvadzi dzako hadzisi pano nesu here?
Mako 6: 2-3
Izvi ndizvo zvazviri! Tinovimba chinyorwa ichi chakubatsira kuti unzwisise Hwana hwaJesu hwaive sei. Kana iwe ikozvino uchida kuziva iyo chikonzero nei Judas anotengesa Jesu, tinokurudzira kuti uenderere mberi nekuvhura Ziva.online.